Taariikh Nololeedka Qoraa Nadiifa Maxamed | JAMHURIYADDA
Home Dib U Eegis Buug Taariikh Nololeedka Qoraa Nadiifa Maxamed
Taariikh Nololeedka Qoraa Nadiifa Maxamed
Nadiifa Maxamed waxay ku dhalatay magaalda Hargeysa, Dalka Soomalida[i] 1981-kii. Nadiifa oo da’ yar ayaa loo la soo qaxay iyada iyo reerkeeda magaalada London, UK sannadka markuu ahaa 1986. Welina halkaas ayay deggan tahay. Waxay waxbarashadeeda ku dhammaysay dalka UK, waxayna ka qalan jabisay Jaamacadda duugga ah ee Oxford. Waxay ku qalin jabisay Taariikh iyo Siyaasadda. Nadiifa waxay haysataa dhalashada UK.
Nadiifa waa qoraa heer sare ah, waxayna cusrisaa sheekooyin gaaban iyo kuwa dheerba, waxay kaloo qortaa maqaallo la xiriira Soomaaliya iyo kuwa kaleba. Qaraxii Xamar ee Oktober 2017 kuma aysan ekaan inay maqaal keliya ka qorto balse waxay ku dartay deeq ay uruurisay. Waxaana qoraalladeeda laga helaa wargaysyada Guardian, Granta iyo iwm.
Sheekooyinka dhaadheer ooy Nadifa qortay waa labo, sida wararka ay sheegaayaan buuggeedi saddexaad ayay ku hawlan tahay. Labada buug waxay kala yihiin: Black Mamba Boy (2010) iyo The Orchard of Lost Souls (2013).
Nadiifa M. waa qoraa kaga yaabisay akhristayaasheeda curinteeda oo heerka sare ah iyo suugaanteeda af-ingiriiska oo aadka u macaan aadna u qurux badan misna sarreeysa. Waa marag maddoonto hibada ay u leedahay Nadiifa Maxamed curinta suugaanta. Taasoo ay ku hantiday magac dheer dalka UK iyo adduunwaynahaba kuna heshay abaalmarinna dhawr ah.
N. M. waa gabar ka muuqata labada dal ay ku lammaanan tahay, kay u dhalatay iyo kan ay dhalashada ka hantidayba. Nadiifa waxay ku faanta isirkeeda Soomaaliyeed isla markaasna kaalin weyn ka qaadataa dalka UK iyo suugaanta af-ingiriiskaba.
Previous articleKenya: Jahawareer Sii Kordhaya
Next articleSomaliland: Taariikhda Waqtigaa Qora